प्रधानमन्त्री ओली यति ठूलो निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको खुलासा, हुँदैछ सरकारमा ठूलै परिवर्तन – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Political Views/प्रधानमन्त्री ओली यति ठूलो निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको खुलासा, हुँदैछ सरकारमा ठूलै परिवर्तन
काठमाडौं । निकै आलोचना खेपीरहेका रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब पुरै मन्त्रिमण्डलको सेट परिवर्तनमा लागेको खुलेको छ । उनी त्यसका लागि छलफल समेत सुरु गरिसकेका छन् ।
पार्टीमा देखिएको तिब्र असन्तुष्टि पछि उनी सबैलाई मिलाएर लैजाने मनस्थितिमा पुगेका छन् । नयाँ मन्त्रीमण्डलमा कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा उनले विश्वासपात्रहरुसँगको छलफल सुरु गरेका छन् ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु र उनका सल्लाहकार समेत विवादमा परेपछि ओलीले पुरै सेट परिवर्तनको तयारी लागेको बुझिएको छ । एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै उनी पार्टीभित्र पनि निकै आलोचित हुँदै आएका छन् । माधव कुमार नेपाल समुहले उनको राजिनामा माग्दै आएको छ ।
उनले यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई समेत चित्त बुझ्ने गरी मन्त्रिमण्डलमा नयाँ मन्त्रीहरु ल्याउन छलफल बढाइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलिले नेकपा फुटाए, औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाकी – नेपाल
कोमामा छन् किम जोङ : पहिला सार्वजनिक भएको फोटो ‘फेक’, सम्हालिन् बहिनीले सत्ता !
सरकारको विरोध हुने भन्दै करो`डौंका उप`करण कि`न्ने निर्णय गोप्य हुदै !!
मभन्दा उत्कृष्ट नेता आऊन्, अहिल्यै छाडि दिन्छु – प्रधानमन्त्री ओली